ShweMinThar: ကျောက်မျက်ရတနာ အတု _ အစစ်ခွဲခြားကြည့်ရအောင်
ကျွန်တော်တို့ဟာ သာမန်ရွှေဆိုင်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ကျောက်အနီအပြာ ရောင်စုံလေးတွေ ကို သဘာဝကျောက်လိုလို ထင်မှတ်ဖူးကြပါ တယ် ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ . . . အများအားဖြင့် တွေ့ မြင် ဝယ်ယူမိကြတာက ချက်ကျောက်လို့ ခေါ်တဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ ကျောက်အတုတွေများ ပါတယ် ။
ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိတဲ့ ကျောက်အတုတွေ ကြားက နေ သဘာဝ ကျောက်မျက် ရတနာအစစ်ကို ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အချက်အလက်တွေ သိရှိထားဖို့လိုပါပြီ ။ သဘာဝကျောက်မျက်ရတနာ အစစ်ဟာ အင်မတန် ရှားပါးလာပါပြီ ။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ထွက်တဲ့ သယံဇာတဖြစ်တဲ့ သဘာဝတွင်းထွက် မိုးကုတ် ပတ္တမြား နဲ့ နီလာဟာ ဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်းလွန်းလို့ ရှားပါး လွန်းလို့ နာမည်ရနေတဲ့ တန်းဝင်ကျောက်တွေပါ ။
တွေ့ နေမြင်နေကျ. . .ချက်ကျောက် (သို့မဟုတ်) အပူပေး / အရောင်ပြောင်း / ဆေးသွင်း ထားတဲ့ Imitation တွေထဲကနေ. . . . သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက်အစစ်ကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတုနဲ့ အစစ် ကွာခြားချက် တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။
ကျောက်အမျိုးမျိုးကို အစစ်လို့ ထင်ရလောက် အောင် ချက်လုပ်/ဖန်တီး ရောင်းချနေကြပြီ မို့ ။ အတု နဲ့အစစ် ခွဲခြား သိနိုင်ဖို့အချက်အလက် တချို့ကတော့ . . ကျောက်အတု / ချက်ကျောက် ဟူသမျှက သဘာဝတွင်းထွက် မဟုတ်ပဲ. . . အပူဓါတ်နဲ့ ချက်လုပ်ကြရတာကြောင့်. . . ကျောက်တစ်ခုလုံးမှာ ပူဖောင်း (သို့မဟုတ်) အမြုပ်လို့ ခေါ်တဲ့ Gas Bubble လေးတွေ ပြည့်နှက်နေတတ်ပါတယ် ။ ကျောက်ကြည့် မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်မှ မြင်ရမှာပါ ။
သာမန်အတိုင်း ကြည့်ရင်တော့အရောင်အသွေး လှပပြီး အပြစ်အနာအဆာ ကင်းစင်နေတာကိုပဲ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီလို အပြစ်အနာအဆာ ကင်းပြီး အရောင်အသွေး လှပလွန်းနေပြီဆိုရင် သတိထားရ တော့မှာပါ။ ကျောက်အတု ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ သဘာဝတွင်းထွက်ကျောက်မျက်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အပြစ်အနာအဆာ မကင်းပါဘူး။
ဂေါ်တို့ မှတ်စာတို့Inclusion လို သဘာဝ အမှတ်အသားလေးတွေ ပါနေတတ်ပါတယ် ။ သဘာဝကျောက်အစစ်တွေမှာ Gas Bubble လို့ ခေါ်တဲ့ အမြုပ်ကလေးတွေ ပူဖောင်းလေး တွေ တစ်ခုတလေ ပါတတ်ပေမယ့် ချက်ကျောက်အတုမှာလို ကျောက်တစ်ခုလုံး ပြည့်နှက်မနေပါဘူး။ တစ်နေရာ လောက် တစ်ခုလောက်ပဲ ပါတတ်တာပါ။ ထင်သာမြင်သာ ရှိအောင် မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်သင့်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့. . . . . မှန်ဘီလူးကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ.. သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်အစစ်ရဲ့ အသားကြောဟာ မကွေ့ မကောက်ပဲ တဖြောင့်တည်း တန်းနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့် မယ် ။ ချက်ကျောက် အတုတွေရဲ့ ကျောက်အသား ကြောတွေကတော့ . . ကွေ့ကောက် ရှုပ်ထွေး နေတတ်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက် သိသင့်တာက အရောင်ပါ။ သဘာဝကျောက်မျက်အစစ် တွေဟာ အရောင်မညီပါဘူး။ အရည်မညီဘူး အရည်ကွက်တယ် စသည့်ဖြင့် ကျောက်မျက်လောကမှာ ပြောကြဆို ကြပါတယ် ။ ဥပမာ ပတ္တမြားတစ်ပွင့်ဆိုပါစို့။
ရုတ်တရက် သာမန်ကြည့်ရင် . . . .အနီရောင် တပြင်တည်းလို့ မြင်ပေမယ့် မှန်ဘီလူးနဲ့ သေချာထောင်ကြည့်ရင် မီးထိုးကြည့်ရင် . . . အထဲမှာ အရည်မညီတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။ အနီရောင်ထဲမှာကိုပဲ အနုအရင့် ကွာခြားတဲ့ နေရာတွေ ပန်းရောင် ခရမ်းရောင် ကွက်နေတာတွေ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ကျောက်တစ်ပွင့်လုံး အရောင်တပြေးညီ ဖြစ်နေ တဲ့ကျောက်အစစ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ် ။ အရည်ညီ ပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ ကျောက်ဆိုတာ အပွင့်ရေ ထောင်း သောင်း ထဲမှာတောင် တစ်ပွင့် ရဖို့မလွယ် / ရှားပါးလှပါတယ် ။ ချက်ကျောက် သို့မဟုတ် အပူပေးပြီး ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ မီးဖုတ်ကျောက်တို့တော့ . . အရောင်ဟာ ကွက်ခြင်းမရှိ၊ မပြောင်းလဲပဲ တပြေးညီ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ် ။ သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက်ရဲ့အသားဟာ သိပ်သည်းကျစ်လစ်ပါတယ်။ ကျောက်အတု ရဲ့ကျောက်သားကတော့ သိပ်သည်းကျစ်လျစ်မှု မရှိပဲ ဖုံပွပွ ဖြစ်နေမှာပါ ။
ကျောက်အစစ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ကြည့်ရင် ပိုသိသာ ပါတယ် ။ ကျောက်အရွယ်အစားကြီးရင် လက်နဲ့ ကိုင်ဆ ကြည့်တာနဲ့ သိသာပါတယ် ။ကျောက်အတုနဲ့ သဘာဝကျောက်မျက်အစစ်ဆိုဒ် အရွယ်အစား တူနေရင် . . . .အလေးချိန်မတူပါဘူး ။
ကျောက်အစစ်က လေးလေးပင်ပင် ရှိပြီး ကျောက်အတုကတော့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ကြုံတုန်း ကျောက်မျက်ရတနာ တချို့ရဲ့သိပ်သည်းဆကို ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။
ပတ္တမြား( Ruby) =3. 99
ကျောက်မျက်အတုကို ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့. . . နောက်ထပ်အချက် တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ . . . . . သဘာဝကျောက်မျက် အစစ်တွေမှာ မာဆင့် ရှိတဲ့အတွက် . . . .ကျောက်သားမျက်နာပြင်ဟာ တော်ရုံ ပွတ်တိုက်မိရုံနဲ့ ပွန်းပဲ့ စင်းရာ မထင်နိုင်ပါဘူး။
ကျောက်အတုတွေဟာ မာဆင့် မာနှုန်း မာဂုဏ် မရှိတဲ့ အတွက် . . . အဝတ်စကြမ်းကြမ်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပွတ်တိုက်ကြည့်ရင် အစင်းရာ ပွန်းရာ ထင်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ဒီနေရာမှာလည်း တလက်စတည်း . . . ကျောက်မျက်တွေရဲ့ မာဆင်စကေးတွေကို ပြောပြခဲ့ပါ့မယ် ။
ပတ္တမြား(Ruby) =9.0
မြ(Emerald) =7.5 – 8.0
ကျောက်တစ်ပွင့်ဟာ အရောင်လည်း တပြေးညီ အရည်ကွက်ခြင်းမရှိ /အထဲမှာလည်း အပြစ်အနာအဆာ လုံးဝကင်းနေမယ်ဆိုရင် . . . အဲဒါ အတု ဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ် ။
သေချာအောင် မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင် ကျောက်အတွင်းပိုင်းမှာ အသားကြောတွေ ကွေ့ ကောက်နေမယ်… အမြုပ် (Gas Bubble) တွေလည်း ရှိနေမယ်. . ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုလည်း မရှိ မာဆင့်လည်း မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ . .
အဲဒါ . . ကျောက်အတုဆိုတာ သေချာပါပြီ ။
မီးထိုးကြည့်ခြင်း . . . နေရောင်မှာ ထောင်ကြည့်ခြင်း. . . မှန်ဘီလူးကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းတွေ အပြင် . . . . ကျောက်မျက်ရဲ့ ရူပဂုဏ်သတ္တိ တို့ … ပုံဆောင်ဓလေ့တို့ အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း တို့အရောင်ပြောင်းခြင်း / နှစ်ဖြာအလင်းယိုင်ခြင်း / အလင်းလက္ခဏာ /အတွင်းမီးအား / စုပ်ယူရောင်စဉ်တန်းများ /မီးစုန်းတောက်ခြင်း လက္ခဏာများ စသည်ဖြင့်လည်း လေ့လာဆန်း စစ်သင့်ပါတယ် ။
ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်(Ultraviolet Ray)နဲ့ ထိုးကြည့်ရင်လည်း . . . . ကျောက်အတုနဲ့ အစစ်ရဲ့ ခြားနားမှုကို သိနိုင်ပါတယ် ။ ကျောက်အတုဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ ထိတဲ့အခါ. . . အရောင်မှိန်ကျသွားပါလိမ့်မယ် ။ သဘာဝတွင်းထွက် ကျောက်မျက်အစစ်ကတော့ ပိုပြီး လင်းလက် တောက်ပ သွားပါလိမ့် မယ် ။
သဘာဝကျောက်မျက် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လုပ်နေရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း သိလာတာလေး တွေ ချရေးကြည့်တာပါ ။
တတ်ကျွမ်းလို့ ရေးပြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ် သိထားတာ ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ ဆိုတာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ ရေးကြည့်တာပါ။
အခု ရေးသွားတာတွေဟာ သာမန် ကျောက်အကြောင်း သိပ်မသိသေးသူ တစ်ယောက်ရဲ့သာမန် အသိ အချက်အလက် လေးတွေမို့လွဲနေတာတွေလည်း အများအပြား ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လေ့လာဖို့ အများကြီးကျန်ပါသေး တယ် ။ တတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီးသူတွေဆီကလည်း သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကျောက်မျက်ရတနာကို … တန်ဖိုးအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်စေသော အချက်အလက် တွေကို တင်ပြပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
Credit: အလင်းဆက် (Gazette)
Posted by Alex Aung at 2:44 AM